उत्पत्ति: "फार्मूला" डेन ब्राउनको अर्को बेस्टसेलर वर्तमान साहित्य
जुआन अर्टिज | | विज्ञान कल्पना, लेखकहरू, नोभेला
मूल (२०१ 2017) ईश्वरशास्त्रीय प्रतीकविज्ञान रॉबर्ट लांगडोनको पौराणिक प्रोफेसर अभिनीत पांचौं विज्ञान कथा उपन्यास हो। यस काल्पनिक चरित्रले डेन ब्राउनलाई सबै समयका सर्वश्रेष्ठ बिक्रि गर्ने लेखकहरू बनाएको छ। मात्र दा भिन्सी कोड (२००)) 2003० मिलियन भन्दा बढी प्रतिहरू अहिलेसम्म मार्केटिंग गरिएको छ।
त्यस्ता तथ्या .्कले हलिवुडका प्रमुख निर्माताहरूको चासो जगायो। वास्तवमा, रॉन होवार्ड द्वारा निर्देशित सबै तीन फिल्म अनुकूलनहरू एक डबल ऑस्कर विजेता: टम ह्याक्स द्वारा अभिनय गरिएको छ। हो ठीक छ मूल यो ती फिल्महरू मध्ये एक होइन, यसको फिल्मांकन केवल समयको कुरा हुन सक्छ, किनकि यो शीर्षक यो पहिले नै बेचिएको लगभग २० लाख प्रतिलिपिहरू जम्मा गर्दछ।
1 उत्पत्तिको विश्लेषण र सारांश
1.2.1 भगवान, गौडी र प्रकृति
1.3 एक अपरंपरागत रिजोलुसन
2 समीक्षा र विचारहरू
3 "सूत्र" डेन ब्राउन
3.1 रोबर्ट लांग्डन, एक धेरै साहसी विश्वविद्यालय प्राध्यापक
3.2 षड्यन्त्र, ऐतिहासिक शहरहरू र सुन्दर साथीहरू
3.2.1 सह-सितारा बन्धन
3.2.2 लान्गडोन तारा .्कित पुस्तकहरूमा वर्णन गरिएका अन्य ऐतिहासिक शहरहरू
4.1 एक लेखक को रूप मा शुरुआत
विश्लेषण र सारांश मूल
En मूल, डेन ब्राउनले नास्तिक वैज्ञानिकहरूको सामान्य प्रश्नहरू सृष्टिवादको दर्शनको बिरूद्ध तुलना गर्दछन्, जसको प्रासंगिकता XXI शताब्दीमा दिन प्रतिदिन घट्छ। यसको लागि, अमेरिकी लेखकले एडमन्ड किर्शको चरित्र प्रयोग गर्दछ, ल्या Lang्गडनका पूर्व विद्यार्थी एकदम चतुर। उनले आफ्नो प्राविधिक आविष्कारहरू र बोल्ड प्रमोसनहरूको लागि एक भाग्य निर्माण गरेका छन्।
अन्वेषणहरूको अन्तिम युवा टाइकुनले दुईवटा प्रश्नहरूको उत्तर दिने वाचा गर्दछ जुन प्रागैतिहासिक कालदेखि नै मानिसहरूलाई सताएको छ: "हामी कहाँबाट आयौं? हामी कहाँ जाँदैछौं? "। उत्तरहरू बिलबाओको गुग्नेहेम संग्रहालयमा भएको एउटा उत्सवमा वर्णन गरिने थियो र उनीहरूका प्रभावहरू विश्वका तीन ठूला धर्महरूको लागि महत्त्वपूर्ण हुन सक्छ, तर ...
उत्पत्ति (संग्रह ...
कार्यक्रम सुरु हुनुभन्दा ठीक अघि, भीडको अगाडि अराजकता फुट्छ पाहुनाहरूको र संसारभरि लाखौं दर्शकहरूलाई प्रत्यक्ष प्रसारण गरिएको छ। तब क्रान्तिकारी प्रकाश सदाको लागि हराउने खतरामा छ। फलस्वरूप, लांग्डन र विदलले किर्सको ईन्ग्मामा पहुँच प्रदान गर्ने पासवर्ड फेला पार्नको लागि हताश दौड शुरू गर्दछ।
भगवान, गौडी र प्रकृति
नायकहरू बार्सिलोना आइपुग्छन्, जहाँ गौडको वास्तुकला विज्ञान र प्रकृतिको बारेमा युवा करोडपतिहरूको सिद्धान्तमा महत्वपूर्ण हुन सक्छ। स्पष्ट रूपमा, भगवान र विज्ञान वनस्पति, जीवजन्तु र सर्पिल ईन्जिनियरिंग बीच एकसाथ छन् कि ला Sagrada Familia को कैथेड्रल को आधारहरु र स्तम्भहरु हावी।
कातालान राजधानीका अन्य स्थानहरू धेरै नै ब्राउन द्वारा वर्णन गरिएको थियो मूल ती हुन् गुग्नेहेम र कासा मिली। जे होस्, यो उल्लेखनीय छ कि स्पेनिश समाज र सरकारको विवरण वर्तमान देखि धेरै टाढा छ। उत्तर अमेरिकी लेखकले स्पेनलाई अत्यन्त धार्मिक देशको रूपमा प्रस्तुत गरे र फ्रान्कोवादको अतिवादी-रूढीवादी प्रभावले तौल गरे।
एक अपरंपरागत रिजोलुसन
कृष्ण द्वारा बनाईएको कृत्रिम बुद्धिमत्ता आफै कथानकको एक महत्वपूर्ण भागको रूपमा देखा पर्दछ। अन्तमा, युवा करोडपतिको जानकारी संसारमा प्रकट हुन्छ र ल्या Lang्डनलाई आज धर्महरूको भूमिका प्रतिबिम्बित गर्न उक्साउँछ।। पूर्वानुमानले एकल, पन्थेटिस्टिक धर्मतर्फ औंल्याउँछ, प्रकृतिसँग मिल्दोजुल्दो छ र सबै मानव बिचको कुराकानीलाई सजिलो बनाउँछ।
यसको शानदार सम्पादकीय संख्याहरूको बावजुद, ब्राउनलाई आफ्नो कथामा दोहोर्याई बान्की प्रयोग गरेको आरोप लगाइएको छ। अन्य आलोचकहरूले यसको कथित ऐतिहासिक अशुद्धता र सपाट संरचना को गुनासो छ। जस्तो Jake केरिज को मामला बाट छ डेली टेलीग्राफ र मोनिका हेसे बाट वाशिंगटन पोस्ट, न्यू हैम्पशायरको कामको कडा निषेधकर्ता।
यद्यपि ब्राउनले नकारात्मक समीक्षालाई कम महत्त्वका साथ प्रस्तुत गर्दछ, वास्तवमा, उहाँ सामान्यतया विडम्बनाका साथ उत्तर दिनुहुन्छ "हरेक आलोचकका लागि मसँग हजारौं खुशी पाठकहरू छन्।" यस अर्थमा, जेनेट मस्लिन बाट न्यु योर्क टाइम्स (२०१ 2017) तपाईंलाई पढ्न आमन्त्रित गर्दछ मूल हास्यको दृष्टिकोणबाट geek। अचम्म मान्नुपर्दैन, किर्शको टेस्ला सवारी दर्ता फ्रेम विज्ञापन यस्तो छ: geeks तिनीहरूले पृथ्वीको अधिकार पाउनेछन्।
"सूत्र" डेन ब्राउन
रोबर्ट लांग्डन, एक धेरै साहसी विश्वविद्यालय प्राध्यापक
यो काल्पनिक चरित्र हार्वर्ड विश्वविद्यालयबाट धार्मिक प्रतीकात्मकता र आइकनोग्राफी मा विशेषज्ञ हुनुहुन्छ। उहाँ उत्कृष्ट शारीरिक अवस्था मा एक मध्यम आयु वर्गका मानिस हुनुहुन्छ - लगातार पौंडी अभ्यासको कारण - महिलाको लागि धेरै आकर्षक आवाजको साथ सम्पन्न। योसँग लगभग eidetic मेमोरी पनि छ, धेरै उपयोगी जब प्रतीकहरूको तुलना र जटिल रहस्यहरू सुल्झाउदा।
षड्यन्त्र, ऐतिहासिक शहरहरू र सुन्दर साथीहरू
नायक सधैं सताइन्छ र कसैलाई मार्ने धम्की दिन्छ, गोप्यसँग सम्बन्धित गुट वा गोप्य संगठन प्रकट गर्न। थप रूपमा, प्रत्येक कथाहरूमा शिक्षकसँग अद्वितीय, आकर्षक र बुद्धिमान पार्टनरको बहुमूल्य समर्थन छ। मा मूल, त्यो भूमिका बिलबाओको गुग्नेहेम संग्रहालयका निर्देशक अम्ब्रा विधलसँग मेल खान्छ।
ल्या Langडोन अभिनित उपन्यासहरूमा, महिला समकक्षको अनुसन्धान गरिएको रहस्यसँग कुनै प्रकारको सम्बन्ध छ वा ऐतिहासिक महत्वको व्यक्तित्वको वंशज हो। मूल यसको कुनै अपवाद छैन किनकि भडाल राजकुमार जूलियनको मंगेतर हो (उनको बुबाको सिंहासनमा उत्तराधिकारी हुनेवाला छ)। उत्तरार्द्धले भल्डेस्पीनो नामको पादरीसँग गहिरो रहस्य राख्दछ।
लान्गडोन तारा .्कित पुस्तकहरूमा वर्णन गरिएका अन्य ऐतिहासिक शहरहरू
रोम भित्र एन्जिल्स र डेमेन
पेरिस र लन्डनमा दा भिन्सी कोड
वाशिंगटन डीसी, मा हराएको प्रतीक
फ्लोरेन्स, मा नरक.
बार्सिलोना, in मूल.
डानियल गर्हार्ड ब्राउन सोमबार जून २२, १ 22 .1964 मा एक्सेटर, न्यू हैम्पशायर, संयुक्त राज्य अमेरिकामा संसार आए। त्यहाँ उहाँ आफ्ना आमाबुबा रिचर्ड ब्राउन (गणित शिक्षक) र कन्स्टन्स (पवित्र गीतहरूको रचनाकार) को नेतृत्वमा बलियो एlic्गलिकन विश्वासको वातावरणमा हुर्कनुभयो। धेरै आफ्नो गृहनगरमा, भविष्य लेखकले १ 1982 XNUMX२ मा फिलिप्स एक्स्टर एकेडेमीबाट उच्च माध्यमिक डिग्री कमाए.
त्यसोभए जवान डेनियलले एम्हार्ट्स कलेजमा संगीत र रचनाको अध्ययन गर्न थाले जुन विश्वको सबैभन्दा प्रतिष्ठित स्नातक संस्थान हो। आफ्नो डिप्लोमा कमाउनको लागि ब्राउनले युरोपमा समय बिताए (España, मुख्यतया)। १ 1985 XNUMX मा स्नातक पछि, उनले बच्चाहरूको संगीतको एक एल्बम रेकर्ड गरे (सिन्थ जनावरहरू) र Dalliance स्थापना गर्नुभयो, एक रेकर्ड कम्पनी।
एक लेखक को रूप मा शुरुआत
डेन ब्राउन १ 1990 XNUMX ० को दशकको शुरुमा पियानोवादक र गायकको रूपमा क्यारियर बनाउने आशामा क्यालिफोर्निया सरेका थिए। समानान्तरमा, उनी आफैंलाई टेवा दिन बेभर्ली हिल्स हाई स्कूलमा अंग्रेजी र स्पेनिश कक्षाको प्रस्ताव गर्छिन्। त्यसको लगत्तै उसले नेश्नल एकेडेमी कम्पोजर्समा भर्ना भए, जहाँ उनले ब्लेथे न्यूलोनलाई भेटे, जो १ 1997 2019 to देखि २०१ XNUMX सम्म उहाँकी श्रीमती थिइन्।
१ 1993 XNUMX of सम्ममा उनले थप निश्चित रूपमा लेख्न थाले; यसको परिणाम थियो डिजिटल किल्ला (डिजिटल किल्ला) १ 1998 XNUMX in मा, उनको पहिलो उपन्यास। त्यसपछि तिनीहरू देखा परे एन्जिल्स र डेमेन (२००१) - ल्या Langडनको "पहिलो" - र षडयन्त्र (२००१), ब्राउनको अभिषेक कार्य अघि: दा भिन्सी कोड.
लेखको पूर्ण मार्ग: वर्तमान साहित्य » विधाहरू » विज्ञान कल्पना » मूल
स्यान्टियागोको सडक। पुस्तक र उपन्यासको चयन